झगडा हुँदाखाने र हुनेखाने बीचकै हो !
डा. गाेपाल ठाकुर शनिबार, कात्तिक २९, २०७७ मा प्रकाशित
अहिले देशका तीनोटै ठूला दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका साथसाथै पूर्व पञ्चहरूकै पार्टीमा भित्री गडबडी उत्कर्षमै छ । कुनै दलमा छताछुल्ल हुनेगरी पोखिएको छ भने कुनैमा पोखिन बाँकी छ । खास गरी अहिले नेकपाभित्रको गडबडीलाई एउटा कोणबाट भागबण्डा नमिलेको भनेर अलि बढी प्रचारित गरिँदैछ भने अर्को कोणबाट यसलाई वैचारिक बेमेलको संज्ञा पनि दिने गरिएको छ । अन्य दलहरूमा पनि जारी किचलो यसै सेरोफेरोमा वर्णित भइरहेको छ ।
दलीय व्यवस्थामा बढी नै लुछाचुँडी भयो भनेर राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायतको नाममा एकदलीय राजशाही कायम गरेका थिए । तर पञ्चहरूकै बीचमा भागबण्डा नमिलेर पछि पञ्चायत फोरम पनि बनाउनु परेको थियो । नेपाली काँग्रेसमा २००७ सालदेखि नै सहोदर दाजुभाइ मातृका र विश्वेश्वरको बीचमा सहुलियतको भागबण्डामै कुरो नमिलेर मातृकाले दरबार शरणम् पनि गरे । अहिले पनि देउबा र पौडेल बीचको रडाँको भागबण्डामै देखिएको छ ।
दलीय व्यवस्थामा बढी नै लुछाचुँडी भयो भनेर राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायतको नाममा एकदलीय राजशाही कायम गरेका थिए । तर पञ्चहरूकै बीचमा भागबण्डा नमिलेर पछि पञ्चायत फोरम पनि बनाउनु परेको थियो ।
जहाँसम्म कम्युनिष्टहरूको कुरो छ, कार्ल मार्क्सले आदिम साम्यवाद पछि अहिलेसम्मको मानव इतिहासलाई वर्ग सङ्घर्षकै इतिहास भनेका छन् । वर्ग भन्नु नै हुने र नहुने बीचको विभेदको आधारमा मानव समाजमा द्वन्द्वमा पक्ष-विपक्षको शृजन हो । आदिम साम्यवादको अवसान पछि यसको शुरुवात भएको हो । सामन्ती समाजसम्म विपन्नतालाई कुनै अलौकिक शक्तिको श्राप र संपन्नतालाई तिनै शक्तिको वरदानको रूपमा धूर्तहरूले स्थापित गराएका थिए । तर त्यसै ताका पूर्वीय समाजमा कामनाले होइन, उद्यमले मनोरथ सिद्ध हुन्छ भनेर भौतिकवादी दृष्टिकोण स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छः-
अर्थात् गरेर कुनै कार्य पूरा हुन्छ, चाहेर मात्रै हुँदैन किनभने सुतेको सिंहको मुखमा कुनै जङ्गली जन्तु पस्तैन ।
यसै तथ्यलाई पश्चिमी समाजमा शेक्सपियरले आफ्ना दुःखान्त नाटकहरूमा मानिस आफ्नै गलतीले पतनोन्मुख हुने कुरा सिद्ध गर्न खोजे । तर यस तथ्यलाई मार्क्सले व्यवस्थित रूपमा द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवाद स्थापित गरेर वर्ग सङ्घर्षको बाटो देखाए । आदिम साम्यवाद पछि क्रमशः दासप्रथा, सामन्तवाद, पूँजीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै पुनः साम्यवादमा पुग्‍ने बाटो देखाए । अर्थात् साम्यवादमा पुगेर राज्य र शासन-शोषणको अन्त नभएसम्म वर्ग सङ्घर्ष जारी रहने उनको निष्कर्ष हो । वर्ग सङ्घर्ष भनेकै हुँदाखाने र हुनेखाने बीचको सङ्घर्ष हो । अर्थात् हुने र नहुने बीचको सङ्घर्षकै लागि द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवादको स्थापन भएको हो जो जुनसुकै वर्गीय समाजमा चलिरहन्छ ।
कतै धर्मको नाममा, कतै जातिको नाममा, कतै राष्ट्र-राष्ट्रियताको नाममा त कतै मीठो भाषामा हुँदाखानेहरूकै प्रतिनिधिको रूपमा शासनमा पुगेर हुनेखाने नयाँ वर्गमा उक्लेर वितण्डा मच्चाउने काम पनि भइरहन्छ । सोभियत सङ्घ, युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया, अफगानिस्तानलगायत पूर्वी युरोपमा कम्युनिष्ट पार्टीको समाजवादी सत्ता यिनै कारणहरूले समाप्त भएका छन् ।
दसवर्षे जनयुद्धको धरातलमा वाम-लोकतान्त्रिक आन्दोलनले राजतन्त्रलाई विदा गरियो
नेपालमै पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यस्ता कुकर्महरू नभएका होइनन् । फलतः यहाँ तीस वर्ष पञ्चायतले खायो । वाम मोर्चा बन्दा पञ्चायत गयो । फेरि देशको वाम-लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आएको विकृतिले ज्ञानेन्द्रले टाउको उठाए । तर दसवर्षे जनयुद्धको धरातलमा वाम-लोकतान्त्रिक आन्दोलनले राजतन्त्रलाई विदा गरियो । पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर वाम गठबन्धन हुँदा कम्युनिष्टहरूको झण्डै दुई-तिहाइको सङ्घीय सरकार र छ प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार पनि बने । पछि वाम गठबन्धन नेकपामा परिणत भयो । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको यो उपलब्धिले हुँदाखाने वर्ग हर्षित भएका थिए ।
सङ्गठनात्मक हिसाबले दोहोरो इन्जिनका विमानहरूमा दुई चालकको सिको गर्दै दुबै पूर्व पार्टीका अध्यक्षहरू नेकपाका समान हैसियतका अध्यक्ष हुन पुगे । यो व्यवस्थापनको सिको कम्बोडियाबाट गरिएको थियो । दुई दशक अगाडि त्यहाँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अगुवाईमा द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि हुन सेन र नरोदम रनरिदलाई बराबर हैसियतमै प्रधानमन्त्री बनाइएका थिए । हामीकहाँ सङ्घीय सरकार प्रमुखको हैसियतमा क. केपी ओलीको थप जिम्मेवारी पनि रह्यो । निश्चित रूपमा थप जिम्मेवारी हुने पार्टी अध्यक्षले थप संवेदनशीलता देखाउनु पर्ने थियो, तर त्यसो देखिएन ।
गुठी विधेयक, सूचना विधेयक, दल विभाजन अध्यादेश लगायतका कैयौं प्रकरणमा सरकारले घोप्टिनु परेको हो ओम्‍नी घोटाला, वाइडबडी जस्ता आर्थिक घोटालाका काण्डहरू यसै सरकारको पालामा घटे । हाम्रो सार्वभौमिकता बन्धक राख्‍ने एमसीसी, भारत-चीनबाट भएको सिमाना मिचाईमा दोधारे चरित्र प्रदर्शन लज्जाजनक हर्कत रहे भने कोभिड-१९ मा त यो सरकारको नाङ्गोपनलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले थोरै भए पनि आङ ढाक्‍ने काम गर्‍यो । पछिल्लो समयमा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नलेख्‍ने मण्डले राष्ट्रवादी उर्दी पनि यसै सरकारले जारी गरेको हो । करोडौंको भ्रष्टाचारमा सूचना मन्त्रीले राजीनामा नै दिनुपर्‍यो ।
गुठी विधेयक, सूचना विधेयक, दल विभाजन अध्यादेश लगायतका कैयौं प्रकरणमा सरकारले घोप्टिनु परेको हो ओम्‍नी घोटाला, वाइडबडी जस्ता आर्थिक घोटालाका काण्डहरू यसै सरकारको पालामा घटे
निर्मला पन्तको हत्यारा त पता लागेन नै, पर्सामा पार्टी जिल्ला कमिटी सदस्य तथा विन्दवासिनी गाउँपालिका कमिटी सचिव क। मुकेश चौरसियाको शपथग्रहण कार्यक्रममै भाटाले हानेर भएको हत्याका अपराधीहरूमाथि एसपीको गलत अडानले हप्ताभन्दा बढी समय जाहेरी पनि दर्ता हुन नसकेको राज्य आतङ्क पनि ओली सरकारकै उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्दछ ।
यी र यस्ता देश-विरोधी वर्गविरोधी वितण्डाको जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले लिनै पर्छ । साथै यसले के प्रमाणित गर्दछ भने केपी ओली अब कुनै पनि आवरणमा हुँदाखाने वर्गको प्रतिनिधि रहेनन् । त्यसैले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय जुनसुकै स्तरमा कम्युनिष्ट आवरणमा कम्युनिष्ट विरोधीहरूलाई उनले प्रश्रय दिएको एक पछि अर्को गरी प्रमाणित हुँदै आएको छ ।
जहाँसम्म पार्टी सञ्चालनको कुरो छ, अनावश्यक दखल-अन्दाजी केपी ओलीबाटै भएको देखिन्छ । पार्टीको बैठक नगर्ने, बैठक गरिहाले पनि त्यसको निर्णय नमान्ने, अर्का अध्यक्षलाई पार्टीको कामै गर्न नदिने, उल्टै अध्यक्ष प्रचण्डले सहयोग नगरेको भन्ने जस्ता अनर्गल प्रलापहरू पनि नसुनिएको होइन । यति नीच हर्कतको बावजूद भागबण्डा मात्रै नपाएर प्रचण्डले अशोभनीय हर्कत गरेको पनि भन्न बाँकी नराख्‍ने प्रवृत्तिलाई के भन्ने ? त्यति मात्रै होइन, जनताले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको भन्न पनि लज्जाबोध नभएको देखिन्छ ।
हेक्का रहोस् जनताले वामगठबन्धनलाई सत्तामा पुर्‍याएको हो र तत्कालीन बामगठबन्धन वा अहिलेको नेकपाले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो । तसर्थ उनले वामगठबन्धनको घोषणापत्रलाई कार्यान्वन गर्नै पर्छ । त्यसको लागि उचित व्यक्ति उचित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नै पर्दछ । यो कुरो पार्टीको निर्देशनमा हुनु पर्दछ जसको कुनै पनि बेला क। केपी ओलीबाट पालन भएको देखिँदैन । त्यसैले वहाँ अहिले आफू मालिक र बाँकी सबै उनका दास हुनु पर्ने भ्रम पालेर बस्‍नु भएको छ । यो भनेको पार्टी भित्रै पनि उहाँले वर्ग सङ्घर्षको निम्तो दिएको ठहर्छ र त्यहाँ पनि वर्ग सङ्घर्ष अवश्यंभावी छ । त्यसो गरिएन भने नेकपाको भविष्य त डुब्छ नै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन पुनः लामै समयको लागि विसर्जन हुनबाट कसैले रोक्‍न सक्तैन ।